Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle: Waxaan u baahannahay taageero xooggan – Kalfadhi
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle: Waxaan u baahannahay taageero xooggan
Shiikh Cismaan Barre Maxamed guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle oo u warramayay warbaahinta Kalfadhi ayaa sheegay in baarlamaankiisa ay heystaan caqabado fara badan ayna ka mid yihiin deegaan la’aan baahsan; xafiis la’aan iyo hoolkii shirarka oo aan u dhisneyn, waxa uuna sheegay in ay ku shaqeeyaan deegaanno ay leeyihiin dad shacab ah.
Tababarro loo fidiyo shaqaalaha iyo xildhibaannada Baarlamaaka Hirshabeelle, iyo caawinaad dhanka dastuurka iyo xeerar hoosaadyada ayuu sheegay in ay codsanayaan in aad looga caawiyo.
Iyadoo caqabadahaas ay jiraan ayuu sheegay in shaqada baarlamaanku ay meel wanaagsan mareyso, ayna ku jiraan kalfadhigii afaraad.
Waxa uu sheegay in dhawaanahan shaqada ugu weyn ee ay hayeen ay tahay la xisaabtanka xukuumadda oo ilaa hadda ay shan wasiir horyimaadeen.
Hal hindise sharciyeed oo ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabeelle ayuu sheegay in baarlamaanka uu horyaallo, dhawaanna ay kuwa kale filayaan.
Guddoomiye Sh.Cismaan waxa uu beeniyay in tiro ka mid ah xildhibaannada Hirshabbeelle ay Mogadishu u joogaan sababo amni xumo iyagoo aan soo mari karin waddada u dhaxeysa Mogadishu iyo Jowhar.
Halkan ka dhageyso wareysiga Sh.Cismaan uu Kalfadhi siiyay.
Sanatar Bukhaari Oo Maktabad Dadweyne Ka Hirgaliyay Cadaado